Ny mofomamin'ny mofomamin'ny vehivavy amin'izao fotoana izao dia azo raisina ho poketrany manerantany. Voalohany, ny safidy ny alokaloka dia ahafahanao mamorona sary amin'ny endrika samihafa - fandraharahana, takariva, isan'andro. Faharoa, manamboatra karazana modely maoderina ny mpahaikanto, izay mifanaraka amin'ny teboka rehetra voalaza etsy ambony. Ankoatra izany, ny manga dia mendri-pandaminana sy mahaleotena, mahazatra ary voatokana, vehivavy ary mahasoa. Raha ny zava-misy, ny haavon'ny hatsaran-tarehy iray any an-danitra dia manana fialan-tsasatra maro - hatramin'ny haizina sy ny mazava, ary ny tononkalo rehetra amin'izao fotoana izao. Andeha hojerentsika, inona ny akanjo manga ataon'ny vehivavy?
Vehivavy mavomavo manga . Ny fanapaha-kevitra malaza indrindra dia ny mifidy kitapo misy pataloha. Ny akanjo manga ataon'ny vehivavy toy izany dia tsara ho an'ny sary an-tsary. Saingy miaraka amin'ny akanjo tsara tarehy sy mahaliana, ny ensemble dia tena hiditra tsara ao anaty tsipika mahazatra isan'andro.
Fitafy manga malefaka amin'ny akanjo . Ireo mpankafy ny fikambanan'ny vehivavy sy ny haavony dia manolotra safidy amin'ny akanjo. Amin'ity tranga ity, ny fitafy manga vavy dia mety tsy ny kilasy fotsiny ihany, fa koa ny tanora, kezhualny ary amin'ny fomba amam-pihetseham-po. Na izany aza, ny akanjo malaza amin'ny setroka - ity jirobe ity, ny akanjony, ny akanjony, ary ny akanjony amin'ny endriky ny pensilihazo, ny sekolin-taona, taona, mini kely.
Fiakanjo manga vavy hariva . Ny modely tsara tarehy dia naseho tamin'ny fomba fijery tsara tarehy teo amin'ny fivoahana. Ny safidy malaza dia ny akanjo vita amin'ny manga vita amin'ny manga, chiffon, silk, ary koa ny lanjan'ny fatorana. Ny fanampiana maoderina dia matetika fanontana amin'ny loko mainty. Ny vahaolana lamaody ho an'ny tsipika hariva dia akanjo maitso maitso amin'ny akanjo mare midi sy ny kofehy top .
Ny fitafy manga malefaka dia ho toy ny singa fototra amin'ny sary. Noho izany, tokony hofidina ny kiraro sy ny fitaovana mba hamenoany ny sary rehetra. Ny safidy tsy azo ovaina indrindra dia heverina ho vahaolana amin'ny ambaratonga tsotra. Ny loko mainty sy fotsy dia mijery tsara amin'ny manga mangatsiatsiaka ary tsy manapaka izany. Ankoatra ny hatsembohana amin'ny kiran'ny kirany sy ny valiha feno alim-be. Tsarovy fa ny gamma manala ankehitriny dia heverina ho classique, ary koa mainty sy fotsy. Raha mitady karazana marevaka kokoa sy niavaka ho an'ny akanjo manga ianao, dia ny vahaolana tokana mety amin'ity tranga ity dia ny safidy amin'ny akanjo mena. Ankoatr'izany, ny lamaody dia tsipika madinikao. Nefa amin'ity tranga ity, ny singa rehetra amin'ny sary dia tsy maintsy mitovy amin'ny fanalahidy iray ihany.
Mihetsiketsika ny pataloha
Tady mainty hoditra
Vehivavy kamboty sweater
Toe-jomoka sy blozy
Corsets ny vehivavy
Jacket miaraka amin'ny Basque - sary 45 mahazendana ho an'ny tsirony rehetra
Calvin Klein Manambara
Ahoana ny fomba fijery tsara tarehy?
Halloween Ideas ho an'ny zazavavy
Tabilao modely ho an'ny ankizy
Ahoana no hampidinana ny hemôglôbinina amin'ny ra?
Ny parrot dia manana beak
Fiaramanidina Frantsay 2014
Pasta misy tomato paste
Jelly mofomamy misy voankazo sy tsiro
Ahoana no hanaovana cocktail proteinina?
Sakafo ho an'ny fitomboan'ny volo
Inona no manitikitika ny lamaody amin'ny taona 2015?
Lamba rongony - kodiarana
Fiofanana ho an'ny mpandray anjara
Ny endrika eo amin'ny araben'i Natalie Portman taorian'ny didim-panjakana ... dia nahatonga ny fifamoivoizana!
Ahoana ny fisafidianana ny mena?
Garden callas - fambolena sy fiahiana
Famafazana papillomas - 7 fomba tsara indrindra